Iimpahla zabantwana, ilaphu labantwana, iColth yabaselula - iJiaTian
Ilaphu elitofotofo, ukuziva uthambile kwaye ucocekile, umsebenzi ogqwesileyo, ukhululekile ukunxiba ukufudumala.
Ilaphu likhaphukhaphu, lithambile, lixubekile kwaye alicaphukisi ulusu.
Vumela abathengi bazive bekhululekile kwiimveliso abazisebenzisayo
jonga iinkcukacha ukuqinisekisa umgangatho
Iprofayile yekhampani :
Hebei JiaTian Rhweba ngaphakathi & Rhweba ngaphandle, Ltd, eyasekwa ngo-2002, kwaye isekwe kwisixeko saseShijiazhuang, kwiphondo lase-Hebei, ebandakanyeka kwizambatho zokuthumela impahla ngaphezulu kweminyaka elishumi. Sekusekwe ukusebenzisana kweshishini ixesha elide neYurophu, uMzantsi Afrika kunye nezinye iindawo kunye neemveliso ikakhulu iintsana kunye neempahla zabantwana. okoko yasekwa, inkampani yethu ibambelela kumgaqo "wokuthembeka kunye nokuthembeka" kuqala, ngokusebenza kunye nokuyilwa kwezinto ezintsha, emi nale migaqo, someleza unxibelelwano nentsebenziswano nabathengi.
UZhang Qinghui, ongusihlalo weChina Fashion Designers Association, utolike amagqabantshintshi ale veki yefashoni, “kule veki yefashoni igubungela ukunxiba kwabasetyhini, ukunxiba kwamadoda, iilokhwe zomtshato, iilokhwe, izihlangu, iibhegi, njl. amandla ...
Itshantliziyo elineminyaka emihlanu ubudala u-Alice Jacob ufunda ...
Itshantliziyo elineminyaka emihlanu u-Alice Jacob ufunda kwasebutsheni ukuba ukumela into okholelwa kuyo kungenza umahluko. UJacob uqale wazenzela igama kwangoko kule nyanga, xa iWashington Post yapapasha ileta awayeyibhalele u-CEO we-Gap uJeff Kirwan, ecela intombi encinci ...